डिसहोमको आइपियो कहिले निस्कासन हुदै छ ? जानुहोस ⋆ afno sansar
डिसहोमको आइपियो कहिले निस्कासन हुदै छ ? जानुहोस
प्रकासित : २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ११:०५
सबै भन्दा ठुलो टिभि नेटवर्क डीस होमले आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कम्पनीको पुँजीगत संरचनातर्फ ४७ प्रतिशत हङकङको स्यान्डमाार्टिन इन्टरनेशनल होल्डिङ कम्पनी र बाँकी ५३ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको हिस्सामा छ । कम्पनीको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल र प्रवन्ध निर्देशकमा सुदिप आचार्य हुन् ।आर्थिक संदेश बाट
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ११:०५